Archlinux နှင့် Slackware: MySQL မှနုတ်ဆက်ပါတယ်၊ MariaDB | Linux မှ
Archlinux နှင့် Slackware: MySQL မှနုတ်ဆက်ပါတယ်၊ MariaDB မင်္ဂလာပါ
သူတို့ဟာ Link ပါ | | applications များ, GNU / Linux များ, NOTICIAS, ပရိုဂရမ်းမင်း, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
ခဏလေးအကြာမှာ Archlinux ဆီကအီးမေးလ်ကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ MariaDB သည်တရားဝင် MySQL အကောင်အထည်ဖော်မှုဖြစ်လာမည့်နောက်လာမည့်လ AUR သို့ရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးနောက်လာမည့် Slackware ဗားရှင်းတွင်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပေးသည်။
MariaDB သည် MySQL ၏ fork တစ်ခုဖြစ်သည်။ Oracle မှ Sun Microsystems ကိုဝယ်ယူပြီးနောက် MySQL ကိုတည်ထောင်သူ Michael Widenius ကဖန်တီးခဲ့ပြီး၎င်းသည် PHP, Python, Perl အတွက်စာကြည့်တိုက်များနှင့် modules များအပါအဝင်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်။
Archlinux ကိုပြောင်းရန်သင်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည် -
၎င်းသည် MySQL ၏အစအဆုံးကိုဆိုလိုပါသလော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Archlinux နှင့် Slackware: MySQL မှနုတ်ဆက်ပါတယ်၊ MariaDB မင်္ဂလာပါ
Chakra သည်လည်းဇန်နဝါရီလကုန်→အပြောင်းအလဲကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် http://www.chakra-project.org/news/index.php?/archives/3-Switching-from-MySQL-to-MariaDB.html
ယခုသင် VirtualBox ၏ fork တစ်ခုသာလိုအပ်သည်။
Chicxulub Kukulkan ဟုသူကပြောသည်
ဒါကအံ့သြဖွယ်ပါလိမ့်မယ်။ Q (Mac အတွက် QEMU ဆိပ်ကမ်း) နှင့် Boch များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးမရှိပါ။ ပြီးတော့ငါ Parallels (သို့) VMWare ကိုပြန်မသွားချင်ဘူး။
Chicxulub Kukulkan သို့ပြန်သွားပါ
Chikxulub Kukulcan? ဒါဟာယူကာတန်မှန်လား။
GNOME သေတ္တာများ? ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ဒီပရိုဂရမ်တွေဘာတွေလုပ်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အားလုံး (သို့မဟုတ်အားလုံးနီးပါး) distros တွေဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ငါဘယ်တော့မှနားမလည်ခဲ့ဘူး။ MySQL နဲ့ Martia DB ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုစကားအနည်းငယ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားရှင်းပြနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်
MySQL၊ ထို့ကြောင့် MariaDB သည်ဒေတာဘေ့စ်များဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်ဒေတာများကိုနောက်ပိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်၊ ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ဖျက်ရန်သိုလှောင်သည်။
ယနေ့ MySQL သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာဆာဗာများတွင်ထူးချွန်သည်။ AMP (Apacha + PHP + MySQL) M နှင့် Oracle မှအကြီးမားဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းအတွက်အဓိကစျေးကွက်မှာဒေတာဘေ့စ်ဖြစ်သည်။
XunilinuX ပါ ဟုသူကပြောသည်
Son_Link ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏သံသယရှင်းလင်း🙂
PS: jamin-samuel xDD ။ ငါမမေးခဲ့ဘူး၊
mysql အတွက်အမြဲတမ်းပရိုဂရမ်လုပ်နေတုန်းပါ။ အမှန်တရားကတော့ငါ mariadb ကိုမစမ်းခဲ့ဘူး၊
အဆင့် 1/3: စားပွဲတင်နှင့်ဒေတာဘေ့စအမည်များကိုပြုပြင်
mysqlcheck: Got အမှား - ၁၀၄၅ - ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်သုံးစွဲသူ 'root' @ 'localhost' (စကားဝှက်ကိုသုံးခြင်း) အတွက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငြင်းပယ်သည်။
FATAL ERROR: အဆင့်မြှင့်တင်မှုမအောင်မြင်ပါ
သင် command ကို execute လုပ်တဲ့အခါ DB မှာ root user ရဲ့ password ကိုတောင်းလိမ့်မယ်
အချက်အလက်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်သင် Slackware XD အကြောင်းဘာမှမပြောပါဘူး။ ပက်ထရစ်၏အချက်အလက်များနှင့်မှတ်ချက်များကို - http://slackware.com/changelog/current.php?cpu=i386
ပြောင်းလဲမှုကိုပြုလုပ်ရန် slackpkg နှင့်အတူ Slackware current သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည်။
Slackware ၏ Hardware Recognition သည်မည်မျှကောင်းသနည်းသင်၏စက်ကိရိယာများကိုပထမဆုံးအကြိမ်အသိအမှတ်ပြုသလား။
Slackware သည် Linux လောကတွင်ထင်ရှားသောတည်ငြိမ်မှုဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အားအသေးစိတ်ကျစွာဂရုတစိုက်စစ်ဆေးသည်။ ဤအတွေးအခေါ်များအရ Slackware သည်၎င်း၏တပ်ဆင်မှုမှမည်သည့် hardware အမျိုးအစားကိုမဆိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
အကြံပြုချက် Mr. Linux အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကောင်းစွာရရှိထားသည့်ကျော်ကြားမှုကိုပေးခဲ့သောအသက်အကြီးဆုံးတက်ကြွသော distro ဖြစ်သည်ကိုမမေ့ပါနှင့် ကံမကောင်းစွာပဲ, ငါ installation ကိုကြောက်ရွံ့ကြ၏။
Installation သည်အခြားဖြန့်ဝေမှုများနှင့်မတူပါ။ ဤတွင် DesdeLinux တွင်အသုံးပြုသူအား၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ပြင်ဆင်ရန်သင်ကြားပေးသည့်အလွန်ပြည့်စုံသောဆောင်းပါးအချို့ရှိသည်။ ငါ installation link ကိုထားခဲ့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါ့အတွေ့အကြုံမှာ Slackware ဟာလူကြိုက်များတဲ့ Linux ဖြန့်ချိချက်တွေနဲ့တူတူပဲဟာ့ဒ်ဝဲအသိအမှတ်ပြုမှုခံရတယ်။ အထူးသဖြင့်လတ်တလောဗားရှင်း၌တည်၏။
PS: ဝဗ်ပေါ်၌ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အတိုင်း MARIADB သည်အခြားတိုးတက်မှုအချို့နှင့်အတူ Mysql ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် Syntax နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်အတော်လေးဆင်တူသည်၊ ၎င်းတို့သည်တူညီသောဖန်တီးသူနှင့်သာဆိုင်သည်။
MySQL မှ MariaDB သို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။
ရုံ - အခြား - dl- အသုံးပြုသူ ဟုသူကပြောသည်
Oracle ကြောင့်စီးပွားဖြစ်ဖြစ်ရန် MySQL နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနာဂတ်တွင် ၁၀၀% အခမဲ့ရှိသည့် fork သို့ကူးပြောင်းရန်အထောက်အကူပြုမည့်နောက်ထပ်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်သာဖြစ်မည်။
OpenOffice ကနေ LibreOffice ပြောင်းတာနဲ့အတူတူပဲ။
နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူအတွက် ... ကောင်းပြီ၊ အရာအားလုံးသည်လိုင်စင်နှင့်တိုက်ပွဲများဖြစ်သည်။
pandev92 ကပြောကြားသည်မှာ Oracle သည်အပြောင်းအလဲများမပြောသောကြောင့် MySQL ကိုပိတ်ရန်လိုကြောင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်သောကြောင့်လိုင်စင်ဆိုင်ရာပြissueနာသည် New Builds (နောက်ဆုံးကုဒ်ပြန်လည်တည်းဖြတ်မှုမှပြုစုထားသည့်ဗားရှင်း) စသည်ဖြင့်စသည်။
ငါဖတ်ပြီးတာအပြင် MariaDB သည် MySQL ထက်ပိုမြန်သည်။
bug တွေဒါမှမဟုတ်အားနည်းချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါ MariaDB patches တွေက MySQL ထက်ပိုမြန်ပါတယ်။
ထို့အပြင် F / LOSS သည် MariaDB ကို de-facto SQL engine တစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့်အနာဂတ်တွင်ဤအင်ဂျင်ကိုတည်ထောင်ပြီးသည်နှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စရိုက်ကိုရရှိမည်၊ MySQL ကိုနောက်ကွယ်မှသို့မဟုတ်ဘေးဖယ်ထားလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ MariaDB သို့ပြောင်းခြင်းသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်လွန်ခဲ့သော ၂ လက MyLQL မှ ArchLinux နှင့်ပြသနာများအပေါ် MariaDB သို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
MariaDB ဆိုတာနာမည်ကောင်းလို့ထင်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ငါတို့ဘာသာစကားနဲ့အသံထွက်ပြောဖို့လွယ်တယ်။ ကောလိပ်ကဆရာမလို "mai ese-cu-ele" xDDDDDDDD ကျွန်တော်မသေချာဘူးလား၊ ငါအရမ်းဇီဇာကြောင်နေတယ်ဆိုတာငါမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကရယ်စရာကောင်းတယ်၊ ဒါ့အပြင် copy-peish လို xDD လိုမျိုးငါ့ဆရာဟားဟားလိုမျိုး copy-paste ကပြောတယ်
xD hdp ဘာ hahahaha
ငါအတန်း MAI-SI-QUIuL, FORRO မဝင်ခင်သင်ဟာကြီးမားတဲ့စာလုံးကြီးပေါ်တွင်ရေးရေးသည်။
ကျွန်ုပ်သိလိုသည်မှာ ၀ န်ဆောင်မှု၏အမည်မှာ mysqld ဖြစ်သဖြင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ပိုင်းတွင်ပြproblemsနာများရှိပါသလား။
Ubuntu သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင် Windows ကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်
Draftsight - GNU / Linux အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ CAD အစီအစဉ်